AMISOM Oo Beenisay Dilka Dad Shacab Ah. – SBC
AMISOM Oo Beenisay Dilka Dad Shacab Ah.
Posted by SBC Editor on Julaay 22, 2015 Comments
Howl galka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa beeniyay in shalay ay dad shacab ah ku laayeen Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha hoose halkaas oo ugu yaraan lagu dilay 21 Ruux oo Rayid ah halka 20 kalen ay ku dhaawacmeen.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Howl galka midowga Afrika ee Amisom ayey ku sheegeen aanay Dad shacab ah ku dilin Magaalada Marka beddelkeedana ay dileen Dad ay ku tilmaameen Al-shabaab kuwaas oo ay sheegeen in ay tababar Al-shabaabnimo ah ku qaadanayeen Xaafadda Juujuumo oo ku dhow Xaafadda AL Hindi ee marka ku taalla.
Warsaxaafadeedka ayey ku sheegtay Amisom in ay shir jaraa’id ka qabaneyso saacadaha soo socda kaas oo ay kaga warbixinayaan dhacdadii Shalay ka dhacday Magaalada Marka oo Ciidamada Uganbda ee ka tirsan Amisom ay ku laayeen Dad rayid ah.
Amisom waxa ay sheegtay in Qoryo , waxyabaha Qarxa iyo Calanka Al-shabaab ay ka heleen halkaasi kadibna markii uu falkaasi dhacay taasna ay caddeyn u tahay dhimashada Dadka Rayid.
Waxaa ay sheegeen in Dadka halkaasi ay ku dileen uu ku jirtay Hoggaamiye ka tirsan AL-shabaab kaas oo lagu lagu mgcaabayay Max’ed Daahir.
Waxaana ugu dambeyn ay ku beeniyeen in Ciidamada Amisom ee jooga Magaalada Marka aanay ku lug lahayn leynta Shacab Rayid ah Shalay loogu geystay halkaasi, iyaga oo sheegay in Sharciga u yaalla aysan ku jirin waxyeeleynta Dadka rayidka ah.
Marka laga soo tago war-saxaafadeedkaan kasoo baxay AMISOM ee lagu beeninayo in dad shacab ah ay ku dileen magaalada Marka ayaa dhinaca kale waxa ay shacabka ku dhaqan magaaladaasi iyo maamulkooda xaqiijiyeen in AMISOM ay shalay shacab badan ku dileen magaaladaasi.